Ma dooneysaa in aad ogaato wax ku saabsan HTML soo-saarka? - Weydiiso Calaamado!
Website-yada iyo blogyada waxaa lagu qoray qoraal HTML; waxay ka dhigan tahay in bog kasta oo webka ahi yahay dukumi qaabaysan oo leh hannaanyo HTML oo kala duwan. Mararka qaar way sahlan tahay in la soo saaro ama laga tirtiro xogta website-ka iyo ku keydi qaab qaabaysan, marmarka qaarkoodna waa inaan isticmaalnaa tan ama qalabka wax lagu qoro HTML. Websaydhyada iyo blogyada had iyo jeer ma bixiyaan xogta CSV iyo qaababka JSON, tani waa sababta aan u baahanahay inaan u isticmaalo sawir-baare HTML ah. Iyadoo farsamadani, qalabka software-yada kala duwan wuxuu ka baaraandegaa bogagga shabakadda si loo helo macluumaad wanaagsan oo qaabaysan, kaydsan wakhti iyo lacag badan annaga.
Astaamaha astaamaha HTML:
Waxaa jira habab kala duwan oo ku saabsan hannaanka HTML ama waxsoosaarka xogta suuqyada, iyo xoqitaanka HTML waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan - evod twist ii kit. Qeybaha kala duwan ee astaamaha ah ama sifooyinka ayaa hoos ku xusan.
1. Qaado xog aad u tiro badan oo ka mida nidaamka maareynta maadooyinka kala duwan:
Qaybta ugu fiicnaanta haraaga HTML waxay ka dhigan tahay inaad xoqdo tiro badan oo ah boggaga WordPress. Xitaa marka goob laga soo saaro nidaam maareynta maaddo kale, waxaad ku heli kartaa xogtaas oo aad ku xoqineysaa adigoo isticmaalaya xoqdo HTML ah.
2. Qaab dhismeedka iyo abaabulinta xogta:
Hooska HTML wuxuu noqday farsamo jecel ee webmasters, barnaamijyada, iyo horumarinta webka. Waxay adeegsadaan habkan si ay u abaabulaan macluumaadka la isku dayo oo ay ku duubaan hab lagu fahmi karo.
3..Waxay taageertaa qaabab kala duwan:
Inkastoo xogta la soo saaro had iyo jeer lagu kaydiyo feylka ama qaabka xogta, waxa ugu xiisaha leh waa in HTML-ka xoqitaan uu kuugu keydin karo xogtaada xogta ama xogta kaydka. Adeeggan noocan ah wuxuu ka shaqeeyaa shabakadaha internetka ku salaysan iyo wuxuu ka dhigayaa xogta laga helo goobaha culus oo keliya. Waxay xareeysaa oo ay abaabushaa qoraalka iyo sawirrada labadaba.
4. Wanaagsan xayeysiinta xayeysiinta iyo sheyda kale:
, wicitaanada, goobaha e-commerce iyo blogyada gaarka loo leeyahay. Macluumaadka kale ee cajiibka ah ee macluumaadka waa warbaahinta bulshada; gaabinta HTML waxay ku lug leedahay xogta warbaahinta bulshada iyo xogta macdanta ee tixgelintaada.
5. Way fiican tahay dadka isticmaala Twitter:
Waxaa jira in ka badan 300 oo qof oo isticmaala bogga Twitterka, mana suurtagalayso in warshad caadi ah ay ka dhigto dhammaan xogtaas shabakada bulshada. Si kastaba ha noqotee, xayeysiiyaha HTML wuxuu qabsan karaa shaqadan, wuxuuna xoqin karaa xogta weyn ee macluumaadka muuqaalka iyo tweets.
6. Waxay wax ka qabtaa macaamiisha websaydhka:
Barnaamijka qoraalka ee HTML-ka wuxuu la xiriiraa server-ka webka si la mid ah sida bogagga internetka caadiga ah, helitaanka macluumaadka iyo weydiinta codsiyada maalintii oo dhan. Halkii ay ku tusin lahaayeen xogta shaashadda, sawirka HTML wuxuu kuugu keydin doonaa macluumaadkaaga qalabka kaydka ee xaafadda ama xogta macluumaadka dambe.
Si aad u gabagabayso:
Waa iska cadahay in qoraallada HTML ay istacmaali karaan oo xoqin karaan bogagga internetka ee kala duwan, helitaanka tayada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah wakhti gaaban. Haddii aadan lahayn, ma fahmi kartid boggaga internetka ee weyn oo aan ganacsigaaga ku korin karin internetka. Taasi waa sababta aad marwalba u maalgashanayso xayeysiin HTML ah oo ballanqaadaya natiijooyinka la rabo in lagu jiro daqiiqadaha ama daqiiqadaha.